Doodo badan oo ay dhalisay 60 iyo dhowrka shaqaale oo uu Muungaab (Guddoomiyaha G/Banaadir) shaqada ka ceyriyay. | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaanse baaritaankeenna ka billownay, in arintani tahay mid uu Muungaab kaligii wato iyo in ay la og yihiin madaxda kale ee gobolka Banaadir. Waxaana warar lagu kalsoon yahay aan ku helnay inuusan xattaa ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyaada oo ay isaga tahay inay hoos yimaadaan xafiiska shaqaaleysiinta uusan xattaa ka warheynin, qaabka iyo sababta shaqaalaha intaan la eg shaqooyinka looga ceyriyay.
Waxaan kaloon isku daynay inaan wax ka ogaanno in shaqaalahaan, wax digniin ah la siiyay oo horay loogu wacay maadaama la sheegayo inay shaqadoodii ka soo bixi waayeen, waana sida uu qabo sharciga shaqaalaha ee uu ku Muungaab ku andacoonayo. Waxaana mar aan wareysannay shaqaale magacooda in la sheego ka gaabsaday oo weliba jagooyinka sare kuwa laga qaaday ka mid ah inay noo sheegeen iska daa in iyaga loo yeeree ay iyagu raadinayeen inay la kulmaan Guddoomiye Muungaab maalintii la magacaabay illaa maalinta uu sheegay inuu xilka ka qaaday. Waxeyna noo xaqiijiyeen inay arkeen warqaddaas oo websiteyada ku jirta oo aan iska daa wax kalee aanan email xattaa loogu sheegin.
Waxaana uu mid ka mid ah shaqaalahaas sheegay “ Muungaab waxa uu noola dhaqmay si nin ganacsade ah oo maalintuu rabo dadka u shaqeeya shaqada ka ceyrin kara ee ma noola dhaqmin sidii nin masuul ah oo ay jiraan shuruuc ka reebeysa inuu dadka shaqaalaha ah xuquuqdooda ku tunto”. “ annaga cid noo yeertay oo noo sheegtay inaan qaabka aan u shaqeyneyno aan wax ka bedelno oo weliba digniin na siisay ma jirto. Annagu si naftood hurayaal ah ayaan uga shaqeyneynay G/Banaadir, annaga oo ay midida nabad diidka ay qoorta noo saran tahay, oo aan weliba maalin kasta aan ku soo shaqo tegeyno annagoo dhowr bilood mushaar qaadan in magacyaddeenna lagu soo websiteyada waa wax laga xumaado”
Masuul kale oo isaguna ka mid ah dadka xilalka laga qaaday ayaa waxa uu yiri “Muungaab, meel ay shaqaalo joogaan iyo weliba meel ay ku shaqeeyaan kama warhayo mana aha nin fahansan shaqada hortaalla iyo sida ay tahay in loo maamulo, ee muxuu ku cadeynayaa arinta uu ku doodayo ee ah inay shaqaalahaani shaqadooda ka soo bixi waayeen.” Waxa ay noola eg tahay in qaab kasta oo aan u raadinno inaan la’ nahay wax lagu sababeyn karo shaqo ka fariisinta uu Muungaab ku sameeyay shaqaalaha intaas la eg, waxaana ka badin weynay in Muungaab uu markii horayba uu qoray shaqaalahaan badankooda isaga oo aan cid la tashan hadana uu isagu uu xilka ka qaaday isaga oo aanan cidna la tashan, qiimeyninna inay shaqeeyeen iyo in kale balse mar marsiiyo ka dhiganaya inay shaqadoodii ka soo bixi waayeen.
Ugu danbeyntii, waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya in maalin qura shaqadii laga ceyriyo dhowr iyo lixdan qofood oo ka diiwaan gashan shaqada iyo shaqaalaha gobolka Banaadir, waana mid aad looga naxay loona baahan yahay in madaxda sare ee G/Banaadir ee aan aheyn Muungaab inay sheegaan waxa ay ka og yihiin, maadama wararka aan helayno ay sheegayaan inaysan waxba ka ogeyn. Haddii marka Muungaab uu ku tumanayo sidii horayba u jirtay awoodaha guddoomiyenimo oo wadatashi iyo wadashaqeyni aysan kala dhexeynin madaxda sidiisoo kale madaxweynuhu soo magacaabay, waxaa haboon in madaxweyne Xasan Shiikh uu si degdeg ah uu arintaas wax uga qabto oo weliba dadka xilka laga qaaday, qaabka shaqada looga qaaday baaritaan dhab ah lagu sameeyo oo weliba laga hortago xaq darrada ka socota xafiiska Guddoomiyaha gobolka oo runtii u eg mid soo dhaaftay cabir kasta. Waxaan kaloon rajeyneynaa, in si degdeg ah dowladda dhexe ee federaalka ah khaasatan wasaaradda arrimaha guduhu ay baaritaan ugu sameyso sida ay u dhacday arintani, jawaab degdeg ahna laga soo siiyo shaqaalaha soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ee xaqooda lagu tuntay.
« (Daawo Sawirada) Dood cilmiyeed ku saabsan U sinnaanta waxbarashada G/Banaadir oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Qeybti koowaad ee wareysi uu Agaasimihii hore ee waaxda waxbarashada gobolka Banaadir uu siiyay idaacadda Goob-Joog. »